Akụkọ - PG&E: Tesla ga-emepe ụlọ ọrụ nchekwa ike na California
Ha na PG&E: Tesla ga-emepe ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa ike na California
Dabere na akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ, Tesla erutela nkwado na Gaslọ Ọrụ Ike Gas Pacific (PG&E), otu n'ime ụlọ ọrụ ike kacha ukwuu na United States, iji mepụta usoro batrị dị ukwuu nke nwere ike ruru 1.1GWh maka nke ikpeazụ. Electrek kọrọ na oru ngo a bụ nke kachasị na Tesla bidoro kemgbe 2015 ma ọ dị na California, USA. PG&E na-eje ozi ihe ruru nde mmadụ 16 na etiti na ugwu California. O nyefere arịrịọ nnabata nchekwa nchekwa ike anọ na Kọmitii Ọha Ututu California (CPUC) n'izu gara aga.
Tesla ga-enye ngwugwu batrị maka ọrụ ọhụrụ ahụ, yana ngụpụta nke 182.5MW yana oge ruru 4 awa. Nke a pụtara na ngụkọta arụnyerela eruola 730MWh, nke ya na ihe karịrị 3000 setịpụrụ nke TeslaPowerpack2.
Datanweta data 2016 si na United States Information Ozi nchịkwa dị ka ihe atụ, nkezi afọ eletrik eletrik nke ndị ahịa ụlọ ọrụ US bi na 10,766 kWh, nke pụtara na oru ngo ọhụrụ ahụ nwere ike inye ọkụ eletrik maka ihe dị ka ụlọ 100 n'afọ niile.
Ọ bụrụ na akwadoro, ụdị ọrụ mbụ nke otu a ga-aga na ntanetị tupu njedebe nke 2019, a na-atụkwa anya na ọrụ ndị ọzọ ga-aga n'ịntanetị tupu njedebe nke 2020. Ọ dị mma ịmara na nke a yiri ka ọ dabara na ebumnuche Musk.
N'afọ 2015, Musk kwupụtara ọkwa na a ga-eji 'Tesla Energy' n'ọdịnihu maka oru ngo nwere 1GWh. Mana iji hụ nke a, ịkwesịrị ichere ruo afọ atọ.
Na njedebe nke afọ 2017, Tesla gbara mgba na gọọmentị South Australia, na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike mezue nrụnye nke nnukwu nchekwa batrị batrị n'ime otu narị ụbọchị, wee jiri usoro kachasị elu na mbelata ndagwurugwu iji belata ike mpaghara. nsogbu ịpụ. okokụre.
Ọ bụ ezie na a kacha mara Tesla maka ịrụ ụgbọ ala eletrik, site na Australia ruo Puerto Rico, ụlọ ọrụ ahụ na-atụgharịrị ikike ike ụwa iji mee ka ume ọhụrụ dị ọnụ ala.
Ọrụ South South rụzuru nnukwu azụmaahịa azụmahịa, a na-echekwa na ọ zọpụtara ihe karịrị nde $ 30 n'ime ọnwa ole na ole. Onye mmekorita McKinsey GodartvanGendt kwuru na Nzukọ Ọmụmụ Ike Ọstrelia na Melbourne na Mee afọ a:
N'ime ọnwa anọ mbụ nke arụmọrụ nchekwa nchekwa Hornsdale, ọrụ 90% belatara ugboro ole ndị ọrụ agịga aga n'ihu. Na South Australia, batrị 100MW enwetawo ihe karịrị 55% nke nnweta FCAS, ya bụ, na 2% nke ikike mmepụta, na-enye 55% nke ego ha nwetara.
FastCompany na-akọ na n’ime naanị afọ atọ, ụlọ ọrụ arụnyere akụrụngwa zuru ezu iji chekwaa 1GWh nke ike, nke dị oke mkpa maka iji rụọ ọrụ nke ike imebi emebi.
N'afọ gara aga, Tesla nyere ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa ụwa niile. Mmepe nke 1.1GWh nke oru ohuru ga-abawanye ikike nke ulo oru ike ya.
Okwesiri ịkọ banyere ọnụ ahịa nchekwa batrị nke ụlọ ọrụ niile na-aga n'ihu na-agbada-site na 2010 ruo 2016, ọ dara site na 73%, ya bụ, site na US $ 1,000 kwa KWh ruo dollar 273.
Bloomberg na-atụ anya na ka ọ na-erule 2025, ọnụ ahịa a ga-agbadata na $ 69.5 / KWh. Anyị nwere olile anya na mbọ Tesla ga-agba ga-akpali ndị mmegide isonye na asọmpị ahụ iji mee ka usoro a dịkwuo n'ihu.
Ngwunye batrị, Sili batrị Lithium Ion, Batrị Lithium batrị, Batrị 20ah Lithium Ion, Batrị Lithium-Ion 3.6v, Ibe batrị Lithium,